နောက်ထပ် LEGO ဟယ်ရီပေါ်တာတရားဝင်ပုံများကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်
17 / 05 / 2018 25 / 08 / 2020 ဂရေဟမ် 2823 Views စာ0မှတ်ချက် 2018, 75953 Whomping မိုးမခ, ၇၆၃၈၆ Hogwarts အမြန်, 75956 Quidditch ပွဲစဉ်, ဟယ်ရီပေါ်တာ, Lego, Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ, ထုတ်ကုန်သစ်များ, Wizarding Harry Potter ၏ကမ္ဘာ
ပရိသတ်များသည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအမြင်ကိုရရှိနိုင်သည် Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ အပိုစုံပုံများမှကျေးဇူးတင်စကားမနေ့ကထုတ်ဖော်
မနေ့က Lego Group က နောက်ထပ် LEGO ဟယ်ရီပေါ်တာအစုံသုံးခုကိုကြေငြာခဲ့သည် ကြောင်းသြဂုတ်လ 1 ရက်နေ့တွင်ဖြန့်ချိလိမ့်မည်။ ၇၆၃၈၆ Hogwarts အမြန်, 75956 Quidditch ပွဲစဉ် နှင့် 75953 Whomping Willow အားလုံးမူရင်းအပေါ်အခြေခံထားတယ် ဟယ်ရီပေါ်တာ ပုံပြင်များ။ အဆိုပါအုတ်ဝါသနာရှင် အစုတစ်ခုစီအတွက်ပုံများနှင့်ထုတ်ကုန်ဖော်ပြချက်များဖြန့်ဝေသည်။ wizarding ပရိသတ်များသည်ယခုနှစ်နှောင်းပိုင်းတွင်သူတို့ရရှိမည့်အရာနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုကောင်းမွန်သောအကြံဥာဏ်ပေးသည်။
၇၆၃၈၆ Hogwarts အမြန်
သင်္ဘောပေါ်တွင်အားလုံး Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ ၇၆၃၈၆ Hogwarts အမြန်! Platform93?4ရှိ King's Cross ဘူတာရှိအုတ်နံရံကို ဖြတ်၍ Hogw သို့သွားသောဟယ်ရီ၊arts ။ သင်၏ရထားများကိုရထားပေါ်တွင်ရှာ။ Trolley Witch မှချောကလက်ဖားတစ်ခုယူပါ။ သို့သော် Dementor ကိုသတိထားပါ။ ကံကောင်းတာက၊ Remus Lupine ဟာကြောက်စရာကောင်းတဲ့သတ္တဝါကနေစွမ်းအားကောင်းတဲ့စာလုံးပေါင်းကိုနှိမ်နင်းဖို့ဟယ်ရီကိုကာကွယ်ဖို့နီးကပ်နေပြီ။ ဟယ်ရီပေါ်တာ ကံကောင်းထောက်မစွာ။
•အသေးစားပုံစံ ၅ ခုပါဝင်သည်။ ဟယ်ရီပေါ်တာ၊ Ron Weasley၊ Hermione Granger၊ Remus Lupine နှင့် Trolley Witch တို့အပြင် Dementor နှင့် Scabbers ကိန်းဂဏန်းများလည်းပါဝင်သည်။
•ထင်ရှားသော King's Cross Platform ၉၃၊ ၄ နှင့် Hogw တို့ကိုဖော်ပြထားသည်arts Express ရထား။
•ပလက်ဖောင်းတွင်နာရီနှင့်ရထားလမ်းတံတား၊ ရွေ့လျားနေသောအုတ်နံရံဝင်ပေါက်သို့ ဦး တည်စေသောခြေလှမ်းများ၊ နေ့စဉ်သတင်းစာသတင်းစာ ၂ ပါသောသတင်းစာရပ်ကွက်နှင့် 'Wanted' ပိုစတာများပါရှိသည်။
• Hogwarts Express ရထားတွင်ထိုင်ခုံ ၄ ခုပါ ၀ င်သောရထား၊ ဖယ်ထုတ်နိုင်သောဘေးဘက်နှင့်ခေါင်မိုးအပြင်သကြားလုံးများသယ်ဆောင်သည့် Trolley Witch တို့ပါ ၀ င်သည်။
75956 Quidditch ပွဲစဉ်
သင့်ရဲ့တံမြက်စည်းပေါ်ခုန်နှင့်ရိုက်ထည့်ပါ Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ 75956 Quidditch ပွဲစဉ်! Harry မှ Hermione နှင့်ပါမောက္ခ Snape တို့နှင့်အတူပူးပေါင်းပါ။ Gryffindor အိမ်မျှော်စင်люနှင့်အစေးပေါ်သို့သင်ပျံသန်းစဉ်စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုခံစားပါ။ ဂိုးသမားအတိတ်နှင့်လက်စွပ်ကို ဖြတ်၍ Quaffle ကိုပစ်ချခြင်းဖြင့်အမှတ်ကိုဂိုးသွင်းပါ။ သင့်ရဲ့ပြိုင်ဘက်များ၏တံမြက်စည်းကိုချွတ်နှင့်ပွဲအနိုင်ရရွှေ Snitch ဖမ်းရန် Bludger ပစ်! သင်ဟာ Keeper၊ Seeker, Chaser သို့မဟုတ် Beater ပဲဖြစ်ဖြစ် Quidditch ပွဲမှာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ကစားနိုင်မှာပါ။
•အသေးစားပုံစံ ၅ ခုပါဝင်သည်။ ဟယ်ရီပေါ်တာ, Hermione Granger, Severus Snape၊ Oliver Wood၊ Lucian Bole နှင့် Marcus Flint တို့ဖြစ်သည်။
•တံခါးဖွင့်လှစ်ထားသည့် Gryffindor အိမ်တာဝါ၊ Pop-up မီးစာလုံးပါ ၀ င်သည့် Slytherin အိမ်မျှော်စင်၊ Ravenclaw ဖယ်ရှားနိုင်သော megaphone ဒြပ်စင်၊ Hufflepuff အိမ်မျှော်စင်နှင့်ဂိုးတိုင် (၃) ခု၊ Bludger လုံးသေနတ်သမား။
75953 Whomping မိုးမခ
Hogw သို့သွားပါartပျံသန်းနေတဲ့ Ford Anglia မှာဟယ်ရီနဲ့ရွန်နဲ့ရဲတိုက်တွေပါ Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ ၇၆၃၈၆ HogwartWhomping မိုးမခ! နောက်ကျလွန်း - ပျံသန်းနေသော Ford Anglia သည်ပျက်သွားပြီးအကိုင်းအခက်များတွင်ဖမ်းမိသည်။ သင်၏ထွက်ခွာပြီး Hogw သို့ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်ပါartပြုစုစောင့်ရှောက်သူ Argus Filch နှင့်ပါမောက္ခ Snape တို့ကသင့်ကိုသတိပြုမိသည်။ အိပ်ဆောင်သို့ပြေးအိပ်ရာပေါ်ခုန်ခြင်းနှင့်သင်ပထမ ဦး ဆုံးနေ့ကပြန်လည်လေ့လာသင်ယူစာလုံးပေါင်း, ဆေးရောနှောနှင့်ပိုပြီးပျော်စရာအများကြီးရောနှောအဆင်သင့်။ ဟယ်ရီပေါ်တာ ကံကောင်းထောက်မစွာ။
•အသေးစားပုံစံ ၅ ခုပါဝင်သည်။ ဟယ်ရီပေါ်တာRon Weasley၊ Hermione Granger၊ Seamus Finnigan၊ Argus Filch နှင့် Severus Snape တို့အပြင် Hedwig ဇီးကွက်ပုံ။
•တည်ဆောက်နိုင်သော Whomping Willow သစ်ပင်၊ Flying Ford Anglia ကားနှင့် Hogw တို့ကိုဖော်ပြသည်artရဲတိုက်အပိုင်း။
• Whomping Willow သည်လည်နေသောအကိုင်းအခက်များနှင့် Shrieking Shack tunnel ဝင်ပေါက်ပါရှိသည်။
• Flying Ford Anglia တွင်တံခါး ၂ ခုနှင့်ခရီးဆောင်အိတ်များပါရှိပါတယ်။
3-level Hogwarts ရဲတိုက်အပိုင်း၌ဂိတ်တစ်လုံး၊ parapet လမ်းလျှောက်မှု၊ ဆုံလည် ၃ ခန်း၊
worktable နှင့်အတူအိပ်ရာ, ဆေးစာသင်ခန်းနှင့် Severus Snape ၏ရုံးခန်း။
အဆိုပါ Lego Wizarding ၏ကမ္ဘာ့ဖလား ဟယ်ရီပေါ်တာ Theme ကိုသြဂုတ်လ ၁ ရက်တွင်စတင်မည်။ Fantastic Beasts: Grindelwald ၏ရာဇ ၀ တ်မှုများသည်နိုဝင်ဘာ ၁၆ ရက်တွင်ရုပ်ရှင်ရုံများတွင်ဖြန့်ချိမည်။
← Lego Unikitty! 41456 Unikingdom Fairground Fun ကိုဖော်ပြခဲ့သည်
Lego Jurassic World: Fallen Kingdom 75931 Dilophosaurus တပ်စခန်းတိုက်ခိုက်မှုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း →